🥇 accounting kagqirha wamazinyo
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 862
Yenza iodolo kugqirha wamazinyo
I-logbook ye-accounting yamazinyo yomsebenzi ingabizwa ngokuba luhlobo loxwebhu ekufuneka wonke ugqirha wamazinyo alawule imisebenzi kunye nokusebenza kweengcali. I-logbook ye-accounting yamazinyo wamazinyo ayinakulawulwa ngokufanelekileyo, kuba ingcali ayinakubakho nje ngexesha, ilibale okanye ingafuni ukwenza ingxelo yemihla ngemihla yomsebenzi wayo, kuba ayingabo bonke abanalo ixesha, abanqwenela. Ngaphandle kwalonto, ezinye izinto ziyaphazamisa. Ngethamsanqa, kukho isisombululo kwezi ngxaki. Ndiyabulela kwesi sisombululo, ubalo lwemihla ngemihla lomsebenzi wamazinyo unokugcwaliswa ngokuzenzekelayo. Kwaye, kwangaxeshanye, oku kuba sisiqhelo esisinyanzelo ukuba senziwe, kwangaxeshanye wena nogqirha wakho nichithe xesha. Sithetha ngenkqubo eyahlukileyo ekubonelela ngemisebenzi yobalo lwamazinyo kwaye ikuvumela ukuba ubeke iliso kwingqesho yengcali nganye-le yi-software ye-USU-Soft accounting. Isicelo yi-analogue ye-elektroniki yencwadi yokungena, apho ugqirha angena kwiziphumo zomsebenzi. Abasebenzi abanegunya banokufaka utshintsho kwinkqubo yobalo lwamazinyo kwaye, ke, ukubalwa kweeyure zomsebenzi okanye ukuqeshwa kwezigulana kulungelelanisiwe kwaye ungasoloko ulawula abasebenzi ngoncedo lwenkqubo eluncedo yovavanyo lwamazinyo. Zonke iintshukumo ezirekhodwe kwinkqubo yobalo lwamazinyo ziyagcinwa, ngelixa umqeshwa ongene kwisoftware, kunye nexesha kunye nomhla kubonisiwe.
Inkqubo yogcino lwamazinyo isebenza ngokuzenzekelayo; Kufuneka ungene kwinkonzo, umsebenzi oza kuthi ajongane nomthengi, ixesha kunye nomhla wokuqeshwa. Ukongeza kuloo nto, ukuba ubonakalisa ixabiso lokusetyenziswa kwezinto xa unikezela ngenkonzo, inkqubo yogcino-zincwadi lwamazinyo igcina iirekhodi zezinto ezizenzekelayo kwaye izibhala zivela kwindawo yokugcina izinto ngokuzenzekelayo. Isoftware inakho ukunxibelelana nomnxeba, ekubonelela ngesantya esiphezulu somsebenzi kunye nabathengi. Ukongeza, isicelo se-USU-Soft sinomsebenzi oza kwenziwa ngokwezifiso kumxholo weetemplate zokufumanisa isifo, izikhalazo kunye nezinye iinkcukacha ezisetyenziselwa ukubonelela ngeenkonzo kubaxumi. Oku kukuvumela ukuba uzise ibhalansi emsebenzini ekugcwaliseni iifayile. Imephu yamazinyo, efumaneka kwisoftware, ikunceda ukuba urekhode iziphumo zomsebenzi othile. Ukongeza, ubonakalisa ngokupheleleyo izinyo kwaye wenze inkcazo kumagcisa anemephu efanayo. Ngoncedo lweUSU-Soft, ugcina ngokuzenzekelayo incwadi yeelog yomqeshwa ngamnye, ngelixa unokuthintela ukubanakho ukutshintsha nokucima iirekhodi, kwaye ngaloo ndlela ulawule abasebenzi. Isoftware yinkqubo entsha yokuzala ingxelo yamazinyo ekunceda ukonyusa amazinyo kunye nokuzisa inqanaba lophuhliso kwiindawo ezingazange zibonwe ngaphambili kunye nokubonelela ngenkonzo esemgangathweni kubaxhasi bakho.
Ingxelo 'yobhaliso lwangaphambili' ibonisa idatha malunga nokuba mangaphi na amadinga akhoyo ngoku kurekhodi. Olu lwazi lurekhodwe yinkqubo yobalo lwamazinyo yonke imihla ngaxeshanye. Kuba ukwehla kwenani labatyunjiweyo ngamanye amaxesha kunxulunyaniswa nexesha lonyaka okanye ezinye iiholide kunye neziganeko zedolophu, kuyabonisa ngakumbi ukujonga isampulu yexesha elaneleyo, umzekelo ukusukela kunyaka ophelileyo (kunye nenyanga efanayo nale ikhoyo ngoku) ukuya umhla wangoku. Kwitheyibhile enesiphumo unokubona ukuba ishedyuli ilayishwe kude kangakanani - inani lezithuba zokuqeshwa kugqirha ngamnye, nakwizibiyeli inani lezigulana ezibhaliselwe olu nyulo (utyelelo lokuqala noluphindiweyo). Igrafu engezantsi kwetafile ibonisa ukuba imeko yomthwalo womsebenzi itshintsha njani ngokuhamba kwexesha. Kwisihluzi se 'Isimo', unokukhetha ukuba zeziphi izigulana onomdla kuzo - 'Utyelelo olusePrayimari' okanye 'uHambo oluPhindiweyo'. Umzekelo, unonyuselo, kwaye ufuna ukwazi ukuba iyasebenza na kwaye iyatsala izigulana ezitsha - emva koko ubeke 'uTyelelo lwesiPrayimari' kwisimo (abaguli bokuqala ngabo bangakhange babenexesha lokuqeshwa.)
Iitemplate zerekhodi ezingaphandle ezilungiselelwe zikunceda ukuba unciphise kakhulu ixesha elithathwayo ukugcwalisa irekhodi lokugula. Ukongeza, ukuba neetemplate kuqinisekisa ukuba bonke oogqirha bazalisa iirekhodi zabagula ngaphandle besebenzisa itemplate efanayo. Ukwenza kube lula ukugcwalisa irekhodi lokugula, inkqubo yobalo lwamazinyo ikwacwangcisa ngokwendalo ubudlelwane phakathi 'kweDiagnosis' kunye nezinye iitemplate. Ngokuhambelana noxilongo olukhethiweyo, inkqubo yocwangciso-mali yamazinyo icoca 'iZikhalazo' ezifanelekileyo, 'iAnamnesis', njl.njl. Xa isigulana sisiza kwiklinikhi yamazinyo okokuqala, ulwazi malunga nemeko yesigulana (izikhalazo, ukuxilongwa, imeko yamazinyo kunye neyomlomo) inokufakwa kwinkqubo yobalo lwamazinyo. Ukwenza oku kufuneka wenze uxwebhu loviwo lokuqala. Ukunika isikhokelo kwisigulana malunga neendleko zonyango yindlela yokuqhelanisa isigulana neendleko ezahlukeneyo zonyango lwexesha elide kunye / okanye lonyango olubizayo. Ivumela ugqirha ukuba enze iingcebiso malunga nokhetho kunyango, ebaxhasa ngokubala. Oku kukunceda ukuba unikezele ngenkonzo esemgangathweni kwaye uhlwayele isigulana ngasinye ukuqaqamba komsebenzi wangaphakathi kwiklinikhi yamazinyo. Ngaphandle kwalonto, ukujongwa kweenkcukacha ngokuqinisekileyo kuya kuphumelela ukuthembela kwezigulana zakho kwaye ngenxa yoko bayaqiniseka ukuba bayalihlonipha igama onokulifumana ngenkqubo ye-USU-Soft ehambele phambili yokuphathwa kwamazinyo nolawulo.